Nabadgalyada Wanaagsan Raadinta Deeqda Waxtarka Dheeraadka ah? Wax dheeri ah baro
Home > Maalgelinta iyo Deeqaha
Dhiirrigelinta Maaliyadeed ee Waxtarka Tamarta
Waxaa hadda jira dhiirigelin maaliyadeed oo kala duwan iyo deeqo wax-ku-ool ah oo tamarta iyo deeq-lacageedka loo heli karo guryaha iyo ganacsatada raba in ay kor u qaadaan tamarta tamarta ee dhismahooda, ama abuuraan kuleylkooda dib-u-cusboonaysiin leh ama korontada
Deeqaha Nafaqeynta Guriga
Energy Energy waxay ku siin kartaa deeqo si aad u kontoroosho gurigaaga iyada oo aan loo eegin dakhligaaga. Deeqaha ayaa loo heli karaa qulqulka dabka, qalajinta derbiga, qolka saqafka iyo saqafka adag.
Deeqaha dabacsan ee loftirka waxay ku xiran tahay inta xayiraadda ee gurigaaga, haddii aanad haysan wax daboolin ah oo la shaqeynayo, shaqadu waxay noqon kartaa bilaash, haddii aad leedahay 1-2 injir ah, waa inaad ka qayb qaadataa £ 100- £ 200 kharashka rinjiga, haddii aad haysato 4 inji ama ka badan rinjiga deeqda ayaa si weyn loo yareeyn doonaa laakiin waxaan wali kaaga saari karnaa ilaa xaynka 10.
Xayaysiinta derbiga waxaa caadi ahaan ku kacaya £ 600- £ 800 iyo deeqda waa in ay daboosho wax ka badan kala badhka kharashkan, haddii gurigaaga uu kululeeyo koronto ama shidaal adag shaqadu waxay noqon kartaa bilaash maadaama kaydka CO2 uu noqon doono mid weyn.
Qalabka laydhka adag wuxuu yahay kor u qaali qaali ah, badanaa wuxuu ku kici karaa ilaa £ 8,000.Grants oo loogu talagalay qalabka wax lagu dhejiyo ayaa laga yaabaa inay daboolaan 20-30% qiimaha shaqada oo ku xiran nooca kuleylka gurigaagu leeyahay.
Si aad u ogaato xaddiga deeqda aad ka heli karto shaqadaada rinjiga, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso sahan lacag la'aan ah. Fadlan waxaad xor u tahay inaad na soo wacdid 0800 0 246 234 si aad u hesho fikrad adag oo ah kharashka shaqada iyo deeqda.
Deeqaha kululaynta iyo kuleylka kuleylka
Haddii aad qaadatid lacagta, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay deeq aad ku cusbooneysiiso boorsadaada hadda jira, kaalmada qaybta ah ee kuleylka dhexe ama deeqda si loogu rakibo ama loo cusbooneysiiyo kuleyliyaha kaydka. Shaqadu waxay noqon kartaa bilaash laakiin si loo xaqiijiyo tan waxaan u baahannahay inaan buuxino shahaadada Waxqabadka Tamarta (EPC). Deeqaha ayaa dhawaan isbeddelay waxaana hadda la beegsanayaa guryaha oo aan lahayn kuleyliyaha gaaska. Si aad u ogaato wax dheeraad ah fadlan riix halkan
Waa maxay Shirkadda Tamarta Shirkadda?
ECO waa waajib saaran dhammaan qalabeeyayaasha tamarta ee Great Britain oo leh wax ka badan macaamiisha 250,000. Shirkadda Tamarta Shirkadda waxay ubaahan tahay in alaab-qeybiyeyaasha tamarta si ay u qabtaan shaqooyin kala duwan si loo yareeyo qashinka qashinka guryaha iyo sidoo kale in la yareeyo kharashyada kuleylka guryaha ee qaar ka mid ah qoysaska helaya faa'iidooyinka xaq u leh. Nidaamku wuxuu socon doonaa illaa March 2017 waxaana lagu qiyaasay inuu yahay £ 1bn sanadkiiba.
Maalgelinta ECO waxaa loo qaybiyaa qaybaha 3:
Waajibaadka Qaadista Dabka Carbeed (CERO)
Qalabka Isgaadhinta Qalabka Isgaadhsiinta (HHCRO)
Maalgelinta CERO waxaa loogu talagalay dhaqanka 'awood u leh inuu bixiyo' suuqa oo wuxuu bixiyaa deeqo ku wajahan hannaanka adag ee derbiga, lafaha iyo qalabka godadka daboolka. Tallaabooyinka kale waxaa ka mid ah qolka saqafka, saqafka saqafka ah, daboolka dabka iyo caddaynta suunka. Kaydka CERO ECO waxaa lagu dalbadaa tan tan oo CO2 ah.
Marka loo eego Qiimaha Isku-darka Kharashka Qalabka Isgaadhsiinta ee guryaha, dadka guryaha ku jira ee xaq u leh waxay heli karaan shaqooyin kala duwan. Maalgelinta HHCRO ee shaqooyinkan waxay caadi ahaan ku saleysan tahay lacagta ay tahay in biilka korontada ee guriga uu yareeyo inta uu noolyahay. Sidaas awgeed, tusaale ahaan, rakibidda daboolka dabka oo hoos u dhigaya biilka kuleylka ee 100 oo leh nolol maalmeed 42 waxay keeni doontaa HHCRO Kharashka keydka ah ee £ 4,200. Kaydintaas ayaa markaa kadib lagu dhufan doonaa qaddar maalgelin si loo dhiso heer deeqeed oo lagaa rabo inaad dalbato.
Adeegga Taraafiga ah
Qiimaha quudinta (FIT) wuxuu dhiirigelinayaa soo saaridda tamarta baahsan oo waxaa la siiyaa mulkiilayaasha dabaysha, muraayadaha PV-yada iyo nidaamyada kumbuyuutarrada yaryar. FIT wuxuu bixiyaa abaalmarin dhaqaale oo loogu talagalay maalgelinta tamarta la cusbooneysiin karo
Waa maxay Taraafiga Ku-Saleysan?
Nidaamka Feed-in Tariff (FIT) waa barnaamij dawladeed oo lagu soo bandhigay 1 April 2010, oo loo abuuray dhiirigelinta soo saaridda tiknoolajiyada soo-saarka tamarta casriga ah ee cusbooneysiin kara oo hooseeya, illaa xadka 5MW.
Nidaamka FIT waxaa laga helaa alaab-qeybiyeyaal shati leh. Waxay u baahan tahay in qaar ka mid ah ay bixiyaan lacagaha lagu bixiyo qiimaha jiilka iyo dhoofinta tamarta korontada ee dib loo cusbooneysiin karo iyo kuwa hooseeya. Heerarka dhoofinta iyo dhoofinta dhoofintu waa calaamad la xiriirta taas oo micnaheedu yahay inay kor u qaadi doonaan ama yareeyaan sicir-bararka.
Teknoolajiyada gudaha ee u qalma qorshaha waxaa ka mid ah:
korontada kulaylka (PV) (saqafka oo ku dul taagan ama kali ah)
Tamarta dabaysha (dhismaha dhajinta ama taagan)
digirta qufaca ah
kuleyl iyo kuleyl isku dhafan (CHP).
Qiimaha quudinta ayaa ka kooban saddex qaybood:
Bixin lacag ah oo ka timid alaab-qeybiyahaaga korontada ee saacad kasta kilowatt (kWh) nidaamkaagu wuxuu abuuraa. Tan waxaa loo yaqaan 'tariff'.
Qiimaha dammaanad qaadka korontada oo dheeraad ah oo aanad ku isticmaalin goobta, iyo dhoofinta shidaalka. Tan waxaa loo yaqaan 'tariff qiyaasta dhoofinta' waxaana sidoo kale bixin doona shirkaddaada korontada. Qalabyada yar-yar ayaa tan loo arki doonaa inay kala badh yihiin waxa aad dhalinayso.
Intaa waxaa dheer, marka aad isticmaasho koronto laga sameeyay goobta waxaad u baahan doontaa inaad ka yartahay shabakad qaran - sidaa darteed biilka tamartaada ayaa noqon doona mid hooseeya.
Faahfaahin dheeraad ah oo dheeraad ah ayaa laga heli karaa Energy Savings Trust website
Ama nagala soo xiriir si toos ah 0800 0 246 234 waana ku faraxsanahay inaan ka jawaabno dhammaan su'aalahaaga.
Dhiirrigelinta kuleylka la cusbooneysiin karo
RHI waxay dhiirigelineysaa in ay ka caawiso Ingiriiska in ay gaarto tamarta la cusbooneysiin karo iyo bartilmaameedyada yareynta kaarboon.
Domestic RHI, oo ah nidaam beddelaad ee kuleyliyaha ah ee aan ku xirneyn shabakad gaasta waaweyn, ujeeddadeedu waa in la dhiso kharashka kuleylka dib loo cusboonaysiin karo oo raaxo leh oo la xidhiidha habab badan oo dhaqameed.
RHI aan ahayn gudaha dalka: tani waa qorshe dhiirigeliya dhammaan qalabyada aan guryaha ahayn.
Waa maxay dhiirigelinta kuleylaha la cusbooneysiin karo?
Abaabulka kuleylaha Cusub ee Cusub (RHI) waa mashruuc Dawlada Ingiriiska ah oo abuuray dhiirigelinta farsamooyinka kululaynta dib-u-cusbooneysiinta ee ka dhex jira qoysaska, beelaha iyo ganacsiyada iyada oo la bixinayo dhiirigelin maaliyadeed. RHI waxaa la rajeynayaa in ay sameyso tabaruc muhiim ah oo ku wajahan hadafka 2020 UK ee ku saabsan 12 boqolkiiba kuleylka ka imaanaya ilaha dib loo cusboonaysiin karo.
RHI waxay ka kooban tahay nidaamyada 2 - Domestic and Non-Domestic. Nidaam kasta wuxuu leeyahay canshuur gooni ah, ku biirida xaaladaha, nidaamyada iyo hababka codsiyada. Arjiyada kasta waxaa loo sameyn karaa oo keliya mid ka mid ah qorshayaasha, ama midka Dib-u-Celinta Cusub ee Dib-u-Celinta Cunnololeedka ama Guryaha aan ahayn ee gudaha, laakiin labadaba labadaba.
Dhiirrigelinta kuleylka dib-u-cusboonaysiinta gudaha ayaa loo furay codsiyada 9 April 2014. Qof kasta oo rakibay nidaamka kuleylka uqalma ee u dhaxeeya 15 July 2009 - 8 April 2013 waxay xaq u leeyihiin inay dalbadaan codsadaha dhaxalka. Nidaamka RHI ee gudaha wuxuu daboolayaa guryaha hal guri oo wuxuu u furan yahay mulkiilayaasha, milkiilayaasha gaarka loo leeyahay, Bixiyeyaasha Diiwaangashan ee Guryeynta Bulshada, iyo kuwa iskood u dhisa. Laguma heli karo dhismeyaal cusub oo aan ahayn mashaariic is-dhisa.
RHI-da gudaha waxaa loogu talagalay 'Qorshaha bedelaadda boorsada'. Lacag-bixinta waxaa loogu talagalay in lagu dhiso kharashka ka dhexeeya rakibidda iyo kharashka ku baxa nidaamka kulaylka fosilka iyo habka dib loo cusboonaysiin karo.
Si aad ugu biirto nidaamka RHI ee gudaha waxaad u baahan tahay inaad qaadato helitaanka a Shahaadada Waxqabadka Tamarta (EPC) si loo qiimeeyo u-qalmitaankaaga, waxaana loo baahan yahay mar kasta oo aad iibsato, iibiso ama kireyso guri.
RHI-da gudaha waxay taageertaa tiknoolajiyadda kululaynta dib-u-cusboonaysiinta ee soo socda
Biomass (qoryaha shidaalka ah) oo kuleyliya
Noocyada biyaha biomasska leh ee kululeeyayaasha isku dhafan oo bixiya meel kuleyl ah
Hoosta ku dheji bambooyin kuleylka biyaha
Hawo si biyo u samee biyaha kululeeyaha
Qalabka kululeeyayaasha - saxanka kuxiga ama tuubo laga daadiyo oo kaliya oo bixiya biyo kulul gurigaaga
RHI oo aan ahayn kuwa gudaha ah:
Non-Domestic (RHI) waa barnaamijka deegaanka deegaanka ee bixiya dhiirigelinta maaliyadeed si loo kordhiyo kuleylka kuleylka dib loo cusboonaysiin karo ee qaybta aan gudaha ahayn. Waxay si ballaaran u hadlaysaa waxay bixisaa kabitaan, oo lagu bixin karo sanadaha 20, si loogu qoondeeyo, heerkulbeegyo aan koronto laga dhalin karin, kuwaas oo ay ka mid yihiin warshadaha, ganacsiga, qaybta dadweynaha iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn.
Tiknoolajiyada la cusbooneysiin karo ee soo socda ayaa u-qalma RHI-ga gudaha ah:
dhulka iyo bambooyinka biyaha kulul biyaha
kuleylka qorraxda (illaa 200kWth)
Biyaha kuleylka hawada (haddii ay kululeeyaan)
Biogas (200kWth iyo kor)
Macluumaad dheeri ah oo dheeraad ah ayaa laga heli karaa Website-ka OFGEM